မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ကူးယူဖော်ပြသည့်ယန္တရားများ (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌ပေါက်သည်
Clin Psychopharmacol neuroscience ။ 2012 ဒီဇင်ဘာ; 10 (3): 136-43 ။ Doi: 10.9758 / cpn.2012.10.3.136 ။ EPub 2012 ဒီဇင်ဘာ 20 ။
အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Friedman ဦးနှောက် Institute ၏ Fishberg ဦးစီးဌာန, ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, နယူးယောက်, USA ။
မျိုးဗီဇစကားရပ်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေတစ်ခုစွဲပြည်နယ်သတ်မှတ်ကြောင်းအမူအကျင့်မူမမှန်များ၏တည်ငြိမ်မှုကိုပေးထားမူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ယန္တရားစဉ်းစားသည်။ မြောက်မြားစွာကူးယူအချက်များ, တိကျသောမျိုးဗီဇ၏စည်းမျဉ်းဒေသများမှခညျြနှောငျနှင့်ဖြင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ဖော်အဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်ပရိုတိန်း, အတိတ်ဆယ်စုနှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုကျော်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ဤတွင်ကျွန်တော်မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာအများအပြားအခြားသူတွေအကြား, binding ပရိုတိန်း (CREB), တစ်ဦး Fos မိသားစုပရိုတိန်း (ΔFosB) အပါအဝင်အများအပြားထင်ရှားတဲ့ကူးယူအချက်များဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍများအတွက်စခန်းတုံ့ပြန်မှု element ကကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်နျူကလီးယားအချက် Kappa B က (NFκB) ။ တွေ့မြင်ရမည့်အတိုင်းအချက်တစ်ချက်စီသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်အတွင်းရှိအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းများကိုပြသပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်စွဲစေသည့်ရောဂါလက္ခဏာ၏ကွဲပြားသောရှုထောင့်များကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ လက်ရှိအားထုတ်မှုသည်ဤကူးယူအချက်များသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်နောက်ခံမော်လီကျူးယန္တရားများပါဝင်ပတ်သက်ရသောမှတစ်ဆင့်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏အကွာအဝေးကိုနားလည်ဆီသို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုစွဲလမ်းမမှန်များအတွက်တိုးတက်အဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်မှုများနှင့်ဟော်မုန်းအထောက်အကူပြုတံ့သောစွဲလမ်း၏မော်လီကျူးအခြေခံသို့အခြေခံကျကျအသစ်ကထိုးထွင်းသိမြင်မှု, ထုတ်ဖေါ်ဖို့ကတိပေးပြောကြားသည်။
keywords: ကူးယူမှတ်တမ်းတင်အချက်များ, နျူကလိယ accumbens, Ventral tegmental ဧရိယာ, Orbitofrontal cortex, Chromatin အသစ်ပြန်ပြုပြင်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်း
စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ၏လေ့လာမှုယူဆချက်အပေါ်အခြေခံသည်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏စည်းမျဉ်းအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးမှရသောနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်တဦးတည်းအရေးကြီးသောယန္တရားစွဲနေတဲ့ပြည်နယ်သတ်မှတ်သောအပြုအမူမူမမှန်အခြေခံသောဦးနှောက်အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။1,2) ဒီအယူအဆ၏စောဒနာနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်အတော်ကြာ neurotransmitter စနစ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ၌၎င်း, ဦးနှောက်ထဲမှာအခြို့သောအာရုံခံဆဲလ်အမျိုးအစားများ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာသွေးဆောင်စသောအပြောင်းအလဲမျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများမှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ကျွန်တော်စွဲ-related ဖြစ်ရပ်အတွက်ဘာသာပြန်ချက် posttranslational ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပရိုတိန်းလူကုန်ကူးမှုများ၏အရေးပါပံ့ပိုးမှုများကိုသိသည်အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်, အားလုံးမဟုတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity, မျိုးဗီဇစကားရပ်များ၏အဆင့်မှာကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မျိုးဗီဇစကားရပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတဦးတည်းအလယ်ပိုင်းယန္တရားနှင့်စွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများသောအသက်တာကိုရှည်မူမမှန်များအတွက်အထူးအရေးပါဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်မှတ်တမ်းစည်းမျဉ်း, ဤသည်အခြားယန္တရားများလည်ပတ်ရာ၏ထိပ်ပေါ်မှာ template ကိုပေးပါသည်။
လွန်ခဲ့သော (၁၅) နှစ်တာကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတွင်မျိုးဗီဇဖော်ပြခြင်း၏အခန်းကဏ္forကိုပိုမိုတိုးပွားလာစေသည့်အထောက်အထားများရရှိခဲ့သည်။ ကူးယူထားသောအချက်များမှာပစ်မှတ်မျိုးရိုးဗီဇ၏မြှင့်တင်သောဒေသများတွင်တိကျသောတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်များနှင့်ထိုမျိုးဗီဇ၏ဖော်ပြမှုကိုထိန်းညှိပေးသောပရိုတိန်းများပါဝင်ပတ်သက်နေသည် မူးယစ်ဆေးဝါးအရေးယူအတွက်။ ဒီအစီအစဉ်အရပြသထားတယ် သဖန်းသီး။ 1, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေး, အ synapses မှာ၎င်းတို့၏ကနဦးလုပ်ရပ်များကနေတဆင့်, အနျူကလိယမှအချက်ပြတစ်ခုကိုအာရုံခံအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်မြောက်မြားစွာကူးယူအချက်များနှင့်မှတ်တမ်းစည်းမျဉ်းပရိုတိန်း၏များစွာသောအခြားအမျိုးအစားများလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိ။3) တစ်ဦးကအဲဒီနျူကလီးယားအပြောင်းအလဲများတဖြည်းဖြည်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အလှည့်၌, စွဲလမ်းတစ်ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းရန်ကြောင့်အာရုံကြော function ကိုအတွက်တည်မြဲပြောင်းလဲမှုများကိုအထောက်အကူပြုသောတိကျသောပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်တည်ငြိမ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံ။1,4)
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးမှတ်တမ်းလုပ်ရပ်တွေကို။ အစပိုင်းတွင်အလွဲသုံးစားမှုလုပ်ရပ်၏မူးယစ်ဆေးဝါး synapses မှာသူတို့ရဲ့ချက်ချင်းပရိုတိန်းပစ်မှတ်အပေါ်ပေမယ့်, သူတို့ရဲ့ရေရှည်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုဆဲလ်နျူကလိယအပေါ် convertge ရာမြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြလမ်းကြောင်း၏စည်းမျဉ်းကနေတဆင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာ transfactors ၏မူးယစ်ဆေးစည်းမျဉ်းတိကျတဲ့ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏တည်ငြိမ်စည်းမျဉ်းနှင့်စွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများသောရေရှည်တည်တံ့သောအမူအကျင့်မူမမှန်စေပါတယ်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်စွဲလမ်းမှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်းကူးယူထားသောအချက်များအပေါ်တွင်အဓိကထားသည်။ ဦး နှောက်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောတိုက်နယ်အတွင်းရှိသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများ (ဥပမာ၊ အစားအစာ၊ လိင်၊ လူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု) များကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏တုန့်ပြန်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည့် ဦး နှောက်၏နေရာများအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သောကူးစက်မှုကူးစက်စေသည့်အချက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသော်လည်းနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသည် ဦး နှောက်ဆုချီးမြှင့်မှုအစီအစဉ်တွင် midbrain ၏ ventral tegmental areaရိယာ၌ dopaminergic အာရုံခံများနှင့်အခြားသူများအကြားနျူကလိယ accumbens (ventral striatum)၊ prefrontal cortex, amygdala နှင့် hippocampus တို့ပါဝင်သည်။ တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်အဖြစ်, ယနေ့အထိစွဲ၏ကူးယူယန္တရားများအပေါ်သုတေသန၏အများစုသည်နျူကလိယ accumbens အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။
ΔFosBက encoded ဖြစ်ပါတယ် FosB က c-Fos, FosB, Fra1 နှင့် Fra2 ပါဝင်သည်သောအခြား Fos မိသားစုကူးယူအချက်များနှင့်အတူဗီဇနှင့်ရှယ်ယာ homology ။5) ဤရွေ့ကား Fos မိသားစုပရိုတိန်းဟာသူတို့ရဲ့ကူးယူထိန်းညှိရန်သေချာသောမျိုးဗီဇ၏ကမကထအတွက်ပစ္စုပ္ပန်က်ဘ်ဆိုက်များ AP1 မှခညျြနှောငျကြောင်းတက်ကြွ Active ပရိုတိန်း-1 (AP1) ကူးယူအချက်များဖွဲ့စည်းရန်ဇွန်မိသားစုပရိုတိန်း (ဂ-ဇွန်, JunB, ဒါမှမဟုတ် JunD) နဲ့ heterodimerize ။ ဤရွေ့ကား Fos မိသားစုပရိုတိန်းအလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေး (၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးအပြီးတိကျသောဦးနှောက်ဒေသများတွင်လျှင်မြန်စွာနှင့်ယာယီသွေးဆောင်နေကြသဖန်းသီး။ 2).2) ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုနျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက်အထင်ရှားဆုံးမြင်ကြပေမယ့်လည်းအများအပြားသည်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်မြင်ကြသည်။6) ဤအ Fos မိသားစုပရိုတိန်းအားလုံးသည်သို့သော်အလွန်အမင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်ကြပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးနာရီအတွင်း Basal အဆင့်ဆင့်ပြန်သွားပါ။
drugFosB နှင့် CREB ၏မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေ၏ကွဲပြားသောယာယီဂုဏ်သတ္တိများ။ (က) osFosB ။ အပေါ်ဆုံးဂရပ်သည်အလွယ်တကူညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနျူကလိယတွင်ဖြစ်ပေါ်သော Fos မိသားစုပရိုတိန်း (c-Fos, FosB, osFosB [33 kD isoform], Fra1, Fra2) များပါဝင်သောလှိုင်းများကိုပြသသည်။ ဒါ့အပြင်သွေးဆောင် biFosB (35-37 kD) ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုပြင်ထားသော isoforms ပါ၏ သူတို့ကိုစူးရှသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြင့်အဆင့်နိမ့်၌သွေးဆောင်သော်လည်း၊ သူတို့၏တည်ငြိမ်မှုကြောင့် ဦး နှောက်တွင်ကြာရှည်စွာဆက်ရှိနေသည်။ အနိမ့်ဂရပ်ကထပ်ခါတလဲလဲ (ဥပမာ၊ နှစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်) ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူစူးရှသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစီသည်တည်ငြိမ်သော withFosB isoforms အဆင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုပြသည်။ ဤသည်တစ်ခုချင်းစီကိုစူးရှလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် osFosB ညွှန်ပြသည့်ထပ်လိုင်းများ၏အောက်ပိုင်းအစုကညွှန်ပြနေသည်။ ရလဒ်မှာနာတာရှည်ကုသမှုစဉ်အတွင်းထပ်မံလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ inFosB စုစုပေါင်းအဆင့်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ဂရပ်များတွင်တိုးမြှင့်တိုးမြှင့်လိုင်းအားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည် (ခ) CREB ။ phosphorylation နှင့် CREB ၏ activation မှတဆင့်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အချို့သော ATFs ၏သော induction မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ CRE မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု၏ activation, စူးရှသောမူးယစ်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုတုံ့ပြန်နျူကလိယ accumbens အတွက်လျှင်မြန်စွာနှင့်ယာယီတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤ“ အထွတ်အထိပ်နှင့်နိမ့်ကျခြင်း” ပုံစံသည်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး CRE ကူးယူမှုအဆင့်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ဆေးဝါးများပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားသည်။
အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ရှုမြင်ကြသည် (သဖန်းသီး။ 2) ။ ΔFosB၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် isoforms (Mr 35-37 KD) အားလုံး Fos မိသားစုဝင်များ (အကြောင်း, ကနဦးမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလျှော့ချသော induction ဖြစ်ပါတယ်) သည်းခံစိတ်ကိုပြသသော်လည်း, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်တူညီတဲ့ဦးနှောက်ဒေသများအတွင်းစုပြုံ။7-9) ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနျူကလိယတွင်တွေ့မြင်သော induction ၏ဆွေမျိုးဒီဂရီအတွက်အတန်ငယ်ကွဲပြားပေမယ့်ΔFosB၏ထိုကဲ့သို့သောစုဆောင်းခြင်း, အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးအားလုံးမူးယစ်ဆေးများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ် shell ကို vs. core ကို, dorsal striatum နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများ accumbens ။2,6) အနည်းဆုံးအလွဲသုံးစားမှုပြုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက် osFosB ကို inductor spiny neuron များ - D1 dopamine receptors ကိုဖော်ပြသောသူများ - သည် striatal ဒေသများ၌ရွေးချယ်သောပုံရသည်။ ၃၅-၃၇ kD ၏ DFosB ၏ isoforms များသည်ဤ ဦး နှောက်ဒေသအတွင်းတက်ကြွ။ ကြာရှည်စွာ AP-35 ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းရန် JunD နှင့်အတူအဓိကအားဖြင့်မှေးမှိန်သွားသည်။7,10) ကနေတချို့သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့် စသည်တို့အတွက် ΔFosB homodimers ဖွဲ့စည်းစေမည်အကြောင်းလေ့လာမှုများ။11) နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ΔFosB၏မူးယစ်ဆေးသော induction မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဟန် se နှုန်း တိရိစ္ဆာန်များ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းကြောင်းသို့မဟုတ်ထမ်းဘိုးကိုမူးယစ်ဆေးထိုးခံယူဒီဦးနှောက်ဒေသ၌ဤကူးယူအချက်၏ညီမျှသော induction ကိုပြသပြီးကတည်းက။ , အကုသိုလ်ကံမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်6) ဆနျ့ကငျြ, အချို့နဲ့အခြားဒေသများအတွက်ΔFosBသော induction ဥပမာ, orbitofrontal cortex, ကုသိုလ်ကံမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးလိုအပ်သည်။12)
အဆိုပါ 35-37 KD ΔFosB isoforms ကြောင့်သူတို့ရဲ့အလွန့်အလွန်ရှည်လျားဝက်ဘဝတွေကိုရန်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူစုပြုံ။7-13) ယင်း၏တည်ငြိမ်မှု၏ရလဒ်သည်အတိုင်း, ΔFosBပရိုတိန်းမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ချုပ်ရာပြီးနောက်အနည်းဆုံးရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာများအတွက်အာရုံခံအတွက်ဆက်ရှိနေသေး။ ကျနော်တို့ယခုတည်ငြိမ်မှုနှစ်ခုအချက်တွေကြောင့်ကြောင်းကိုငါသိ၏: အပြည့်အဝအရှည် FosB အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအ Fos မိသားစုပရိုတိန်း၏ C-terminus မှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောနှစ်ခု degron domains များ၏ΔFosBအတွက်မရှိခြင်း) 1 နှင့်လျင်မြန်စွာပျက်စီးခြင်းအဲဒီပရိုတိန်းပစ်မှတ်ထားနှင့် 2) casein kinase2နှင့်ဖြစ်ကောင်းသည်အခြားပရိုတိန်း kinases ဖြင့်၎င်း၏ N-terminus မှာΔFosB၏ phosphorylation ။14-16) အဆိုပါ osFosB isoforms ၏တည်ငြိမ်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်ဖော်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများမူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာ၏အတော်လေးရှည်လျားသောကာလနေသော်လည်းဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည့်အားဖြင့်အသစ်တစ်ခုမော်လီကျူးယန္တရားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် osFosB သည်ပုံမှန်အားဖြင့်“ မော်လီကျူး switch” အဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူပြုသည်။1,2)
မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ΔFosBနျူကလီးယပ် accumbens နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိရစ္ဆာန်များ၏ dorsal striatum အတွင်းရွေးချယ်သွေးဆောင်နိုင်သည့်အတွက် bitransgenic ကြွက်၏လေ့လာမှုကနေအကြီးအကျယ်ရောက်လေပြီ။17) အရေးကြီးတာကအဲဒီကြွက်မူးယစ်ဆေးပရိုတိန်းသွေးဆောင်ယုံကြည်နေကြသည်ရှိရာ dynorphin ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ရွေးချယ်ΔFosB overexpress ။ ΔFosB-overexpressing ကြွက်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုအပြီးကိုကင်းဖို့တိုးပွား locomotor တုံ့ပြန်မှုပြသပါ။17) သူတို့ကအစကင်း၏ရပျရပျအေးစက် assay အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှပိုကောင်း sensitivity ကိုပြ17-19) နှင့်ကိုကင်းများ၏အနိမ့်ဆေးများ Self-စီမံခန့်ခွဲခြင်း, ΔFosB overexpress မ littermates ထက်ကင်းဘို့ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။20) ထို့အပြင်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosB overexpression opiate ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပို. နှင့် opiate analgesic သည်းခံစိတ်ကိုအားပေးအားမြှောက်။19) Morris အတွက်ရေဝင်္အတွက်အကဲဖြတ်အဖြစ်မတူဘဲ, ΔFosBဖော်ပြကြွက် Spatial သင်ယူမှုအပါအဝင်အခြားအမူအကျင့် domains များအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။17) ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens မှΔFosB overexpression ၏တိကျသောပစ်မှတ်, ညီမျှဒေတာလြှော့သိရသည်။19)
ဆနျ့ကငျြ, bitransgenic ကြွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက် enkepahlin ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံ (သူတို့အကြောင်းအများစုအမြန် D2 dopamine receptors) မှΔFosBစကားရပ်ပစ်မှတ်ထားသည်ဤအပြုအမူ phenotypes အများစုပြသရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။19) AP1 ကမကထပြုထားသောကူးယူချက်၏အဓိကအနှုတ်လက္ခဏာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့် Mutant Jun ပရိုတိန်း (JcJun or ΔJunD) ၏အလွန်အကျွံ Expression နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Bitransgenic ကြွက်များသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ကမကထပြုသည့်မျိုးရိုးဗီဇလွှဲပြောင်းမှုကို အသုံးပြု၍ ဆန့်ကျင်ဘက်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုထုတ်လုပ်သည်။18,19,21) ဤအချက်အလက်များက indicateFosB ကို dynorphin ပါ ၀ င်သည့်အလယ်အလတ် spiny neurons တွင် induction ၏ accumbens သည်တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်သည်ကိုကင်းနှင့်အခြားအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုထိတွေ့စေပြီး၊
သည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBသော induction နေဖြင့်ကစားအခန်းကဏ္ဍကိုလျော့နည်းကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ orbitofrontal cortex အတွက်ΔFosBသော induction နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုမြှင့်တင်ရန်အစေခံစေခြင်းငှါ, ရာစူးရှသောကိုကင်းထိတွေ့မှု၏သိမြင်မှု-ကမောက်ကမဖြစ်စေရန်သက်ရောက်မှုအချို့မှသည်းခံစိတ် mediates ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။12,22)
osFosB သည်ကူးယူထားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဗီဇ၏ဖော်ပြချက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့်နျူကလိယနျူကူဘင်၌ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Inducible bitransgenic ကြွက်များအား အသုံးပြု၍ Expos ΔFosBသို့မဟုတ်၎င်း၏လွှမ်းမိုးသောအနုတ်လက္ခဏာΔcJunကို အသုံးပြု၍ Affymetrix ချစ်ပ်များပေါ်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ Vivo အတွက် အဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးမှတ်တမ်း Active အဖြစ်-ΔFosB functions များ, ကမျိုးဗီဇ၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအစုများအတွက် repressor အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်။18) ဒီလေ့လာမှုကလည်းကင်း၏ Genomics သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက်ΔFosBများ၏ကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြ: ΔFosBနာတာရှည်ကိုကင်းများကနျူကလိယ accumbens အတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားလုံးမျိုးဗီဇ၏အနီးကပ်မှတသုံးလပတ်အတွင်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။
ဤသည်မှာမျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ချဉ်းကပ်မှု, အပြိုင်အတွက်အတော်ကြာကိုယ်စားလှယ်လောင်းမျိုးဗီဇ၏လေ့လာမှုများနှင့်အတူ၎င်း၏အပြုအမူ phenotype အထောက်အကူပြုကြောင်းΔFosBအတော်ကြာပစ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇ GluA2, ΔFosBအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်သွေးဆောင်သောတစ်ဦး AMPA အချိုမှု receptor subunit ဖြစ်ပါသည်။17) GluA2 ပါဝင်သော AMPA လိုင်းများဒီ subunit ဆံ့မ AMPA လိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးအပြုအမူများကတည်းကနျူကလိယ accumbens အတွက် cocaine- နှင့် GluA2 ၏ΔFosB-mediated upregulation များ၌တွေ့မြင်လျှော့ချ glutamatergic တုံ့ပြန်မှုများအတွက်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အကောင့်နိုင် နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်ထိုအအာရုံခံ။23)
နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosB၏နောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပစ်မှတ်မျိုးဗီဇဟာ opioid peptide, dynorphin ဖြစ်ပါတယ်။ ΔFosBဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ dynorphin ထုတ်လုပ်ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့အထူးသအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင်ခံရဖို့ပေါ်လာသတိရပါ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသုံးကုသမှုအခြေအနေများပေါ် မူတည်. မြင်ကြတိုးမြှင်သို့မဟုတ်လျော့နည်းစေနှင့်အတူ, dynorphin စကားရပ်အပေါ်ရှုပ်ထွေးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျနော်တို့ΔFosB၏ induction နျူကလိယ accumbens အတွက် dynorphin ဗီဇစကားရပ် represses ပြသခဲ့ကြသည်။19) Dynorphin (VTA) dopamine အာရုံခံ ventral tegment ဧရိယာပေါ်κ opioid receptors ကိုသက်ဝင်နှင့် dopaminergic ဂီယာတားစီးနှင့်ဖြင့်ဆုလာဘ်ယန္တရားများ downregulate မှထင်နေသည်။24,25) ထို့ကြောင့် Dynorphin စကားရပ်၏ dynFosB ဖိနှိပ်မှုသည်ဤကူးယူခြင်းအချက်အားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ဆုလာဘ်ယန္တရားများ၏တိုးမြှင့်ဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ယခုတွင် evidenceFosB ၏အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတွင် dynorphin ဗီဇဖိနှိပ်မှုပါ ၀ င်မှုကိုထောက်ခံသည့်သက်သေသာဓကများရှိသည်။19)
သို့တိုင်နောက်ထပ်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ΔFosBအဆိုပါ represses က c-Fos နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့ပြီးနောက်ΔFosB၏အဓိကစုဆောင်းခြင်းမှစူးရှသောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်အတော်ကြာသက်တမ်းတို Fos မိသားစုပရိုတိန်း၏ induction ကနေ - အစောပိုင်းကကိုးကားမော်လီကျူး switch ကိုဖန်တီးကူညီပေးသည်သောဗီဇ။9) ဆနျ့ကငျြ, cyclin-မှီခို kinase-5 (Cdk5) နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်သွေးဆောင်သည်ကိုကျနော်တို့ကိုပြသကြသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုΔFosBမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။18,21,26) ယင်း၏စကားရပ်ကိုတိုက်ရိုက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ accumbens နျူကလိယ၏ dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်တိုးမြှင့်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကတည်းက Cdk5 ΔFosB၏အရေးပါသောပစ်မှတ်ဖြစ်ပါသည်,27,28) နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောနျူကလိယ accumbens ၌တည်၏။29,30) အမှန်စင်စစ်ΔFosBသော induction ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ဖို့ပိုမကြာသေးမီကပြသလျက်ရှိသည်။31)
ပိုများသောမကြာသေးမီကကျနော်တို့နောက်ထပ်ΔFosBပစ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကမကထ chip ကို (chip-chip ကို) ကသို့မဟုတ်နက်ရှိုင်းသောအစီအစဉ် (chip-seq) ကနောက်တော်သို့လိုက် chromatin immunoprecipitative (chip) ကိုအသုံးပြုကြသည်။32) ဤလေ့လာမှုများသည်အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သော DNA expression arrays များနှင့်အတူ orFosB မှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေမျိုးဗီဇများစွာကိုကြွယ်ဝစွာစာရင်းပြုစုထားသည်။ ၎င်းမျိုးရိုးဗီဇများထဲတွင်အပိုအာရုံကြောဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုလက်ခံစက်များ၊ ကြိုတင်နှင့်ပို့စ်တင်နစ်လုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပရိုတိန်းများ၊ အိုင်းယွန်းလိုင်းများနှင့်ဆဲလ်အချက်ပြပရိုတိန်းများ၊18,32) နောက်ထပ်အလုပ်အဖြစ်ကဤမြောက်မြားစွာပရိုတိန်း၏တစ်ဦးချင်းစီကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ် တရားဝင် ကိုကင်းများ၏ပစ်မှတ်ΔFosBမှတဆင့်သရုပ်ဆောင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီမှာပရိုတိန်းရှုပ်ထွေးအာရုံကြောနှင့်ကိုကင်းလုပ်ဆောင်ချက်အပြုအမူရှုထောင့်ဖြန်ဖြေအတွက်ကစားသောတိကျသောအခန်းကဏ္ဍတည်ထောင်ရန်။
ပရိုတိန်း (CREB) binding သိသိ amp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်မှ neuroscience အတွက်အများဆုံးလေ့လာခဲ့ကူးယူအချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အာရုံကြော plasticity ၏ကွဲပြားခြားနားရှုထောင့်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။33) ဒါဟာသိသိ amp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် (CREs) မှာမျိုးဗီဇမှခညျြနှောငျနိုငျသော homodimers ဖြစ်ပေါ်လာသောပေမယ့် (တော်တော်များများပရိုတိန်း kinases မဆိုအားဖြင့်) Ser133 မှာ phosphorylated ထားပြီးအပြီးအဓိကအားဖြင့်ကူးယူမြှင့်လုပ်ဆောင်, ထို့နောက်ကြောင်း CREB-binding ပရိုတိန်း (CBP) ၏စုဆောင်းခွင့်ပြုထားတဲ့ ကူးယူအားပေးအားမြှောက်။ CREB activation အချို့မျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး represses သောယန္တရားလျော့နည်းကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။
psychostimulants (ကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်း) နှင့် opiates နှစ်မျိုးလုံးသည် CREB ၏လှုပ်ရှားမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်စွာတိုးပွားစေပါသည်။ နျူကလိယနျူကူရီဘင်နှင့် dorsal striatum အပါအ ၀ င် ဦး နှောက်ဒေသများစွာတွင် phospho-CREB (pCREB) သို့မဟုတ် CRE-LacZ transgene ကြွက်များတွင်သတင်းထောက်မျိုးဗီဇလှုပ်ရှားမှုဖြင့်တိုင်းတာသည် ။34-36) ဒီ activation ၏အချိန်သင်တန်းΔFosBအားဖြင့်ပြသနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အဖြစ် သဖန်းသီး။ 2, CREB activation စူးရှသောမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အလွန်အမင်းယာယီသည်နှင့်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွင်းသာမန်အဆင့်ဆင့်ရောကျသှားသညျ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, CREB activation အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏နှစ်ခုစလုံး dynorphin နှင့် enkephalin Subtype ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။34) ကိုကင်းနှင့်အ opiates မတူဘဲ, CREB အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်မတူညီတုံ့ပြန်မှုပြသထားတယ်။4)
CREB ၏သွေးဆောင်မှုအလွန်အကျွံထုတ်လွှတ်မှုသို့မဟုတ် bitransgenic ကြွက်များသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသယ်ဆောင်သူများနှင့်လွှမ်းမိုးသောအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ပါဝင်သောစမ်းသပ်မှုများအရ CREB ကို activFosB နှင့်ထူးခြားစွာနှိုင်းယှဉ်လျှင် - နျူးကလီးယပ်စ်တွင် accumbens သည်ကိုကင်း၊ assay ။37,38) မည်သို့ပင်ဆိုစေ CREB activation, ΔFosBသော induction လိုပဲမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်။39) အရေးကြီးကြီးစိုးအနုတ်လက္ခဏာ CREB နှင့်အတူဆိုးကျိုးများ endogenous CREB လှုပ်ရှားမှု၏သွေးဆောင် knockdowns နှင့်အတူအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။39-41) နှစ်ဦးစလုံးကူးယူအချက်များကုသိုလ်ကံမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုမောင်းကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဒါဟာဖြစ်၏ CREB အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မှတဆင့်ဒီ phenotype induces သော်လည်းယူဆရΔFosB, အပြုသဘောအားကောင်းမှတဆင့်ဒါပါဘူး။ အဆုံးစွန်သောဖြစ်နိုင်ခြေကဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ CREB လှုပ်ရှားမှုအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ဖြစ်စေသောစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။34,42)
CREB လှုပ်ရှားမှုတိုက်ရိုက်နျူကလိယ၏အလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအလတ်စား spiny အာရုံခံ accumbens ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ လွှမ်းမိုးကအနုတ် CREB လျှောက်လျော့နည်း, အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏လျှပ်စစ်စိတ်လှုပ်ရှားသော်လည်း CREB overexpression တိုး။43) dynorphin နှင့် enkephalin အာရုံခံအကြားဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကွဲပြားခြားနားမှုသေးစူးစမ်းကြပြီမဟုတ်။ တစ်ဦး K သည်၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ကြောင်းလေ့လာရေး overexpression+ အလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျစိတ်လှုပ်ရှားလျော့ကျသောနျူကလိယ accumbens အတွက်ရုပ်သံလိုင်း subunit, ကိုကင်းဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ် CREB အာရုံခံဆဲလျစိတ်လှုပ်ရှား upregulating အားဖြင့်ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းအပေါ်တစ်ဦးချိုးအဖြစ်ပြုမူကြောင်းအကြံပြုထားသည်။43)
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနျူကလီးယပ် accumbens ကျော်လွန်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင် CREB ကိုသက်ဝင်။ ဥပမာတစျခုကိုကင်းသို့မဟုတ် opiates ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး dopaminergic နှင့် Non-dopaminergic အာရုံခံအတွင်း CREB မြှင့်လုပ်ဆောင်ရှိရာ ventral tegmental ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်စေသည့် ventral tegmental ဧရိယာ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းပေါ် မူတည်. အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးတုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ် attenuate ပုံရသည်။
CREB များအတွက်မြောက်မြားစွာပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအဆုံးသတ်-ပွင့်လင်းနှင့်ဤနှင့်နျူကလိယပေါ်ရှိအခြားဆိုးကျိုးများအလတ်စား spiny အာရုံခံနှင့်ရရှိလာတဲ့ CREB အပြုအမူ phenotype accumbens ဖျန်ဖြေပေးသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇချဉ်းကပ်မှု, နှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။18,32,36) ထင်ရှားတဲ့ဥပမာကတော့ opioid peptide dynorphin ပါဝင်သည်,37) အရာနောက်ကျော feeds အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဖော်ပြထားအဖြစ်နျူကလိယ accumbens မှအချက်ပြ dopaminergic ဖိနှိပ်။24,25) ဒါ့အပြင်အချို့အချိုမှု receptor ထိုကဲ့သို့သော GluA1 AMPA subunit နှင့် GluN2B NMDA subunit အဖြစ် subunits, အဖြစ်ငွေကျပ်များမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ+ နှင့် Na+ အတူတူနျူကလိယဆဲလ်စိတ်လှုပ်ရှား accumbens ထိန်းချုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်လို့ထားတဲ့အိုင်းရုပ်သံလိုင်း subunits ။43,44) BDNF နျူကလိယ accumbens ဆဲ CREB များအတွက်အခြားပစ်မှတ်ဗီဇဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လည်း CREB အပြုအမူ phenotype ဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။35) CREB induction သည် cocaine ၏ dendritic spines များကိုနျူကလိယပေါ်မှအလယ်အလတ် spiny neurons များထဲသို့သွေးဆောင်ရန်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။45)
CREB သည် CREs နှင့်စည်းနှောင်ထားသောမျိုးဗီဇ၏ကူးယူခြင်းကိုထိန်းညှိပေးသောပရိုတင်းများထဲမှတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ အဆိုပါသိသိ AMP တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် modulator ကို (CREM) ဗီဇ၏ထုတ်ကုန်အများအပြား CRE-mediated ကူးယူထိန်းညှိ။ ထုတ်ကုန်အချို့ (ဥပမာ - CREM) သည်ကူးယူခြင်းပြုလုပ်သောလှုပ်ရှားသူများဖြစ်ပြီးအခြားသူများ (ဥပမာ - ICER သို့မဟုတ် inducible cyclic AMP repressor) သည် endogenous လွှမ်းမိုးသောအနှုတ်လက္ခဏာဆန့်ကျင်ဖက်များအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့အပြင်အချို့သောသက်ဝင်လှုပ်ရှားသောကူးယူနိုင်သည့်အချက်များ (ATFs) သည် CRE က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇထုတ်ဖော်မှုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်မှုတွင်ဤအမျိုးမျိုးသောကူးယူအချက်များပတ်သက်။ ပါပြီ။ Amphetamine သည်နျူကလိယနျူကူဘမ်တွင် ICER ၏ဖော်ပြချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဒေသရှိ ICER ၏အလွန်အကျွံထုတ်ဖော်မှုကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကမကထပြုထားသောမျိုးရိုးဗီဇလွှဲပြောင်းမှုကြောင့်တိရစ္ဆာန်၏မူးယစ်ဆေးဝါး၏အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုထိရောက်စေသည်။46) ဤသည်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်ကြီးစိုးအနုတ်လက္ခဏာ CREB Mutant ၏ဒေသခံ overexpression သို့မဟုတ် CREB ၏ဒေသခံ knockdown အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြုပြင်ကြောင်းကိုအထက်တွင်ကိုးကား။ အဘယ်သူမျှမသက်ရောက် ATF2 သို့မဟုတ် CREM အဘို့မြင်ကြစဉ်တွင်ဖက်တမင်းဆေးပြားကိုလည်းနျူကလိယ accumbens အတွက် ATF3, ATF4 နှင့် ATF1 ဖြစ်ပေါ်သည်။47) ATF2 သို့မဟုတ် ATF3 overexpression ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်စဉ်ကဒီဒေသအတွက် ATF4 overexpression, ICER ၏တူ, စိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ အနည်းငယ်သာဤအထူးထူးအပြားပြား CREB မိသားစုပရိုတိန်း, အနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးပါသောလမျးညှနျပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအကြောင်းကိုလူသိများသည်။
နျူကလီးယားအချက်-κB (NFκB), လျှင်မြန်စွာကွဲပြားခြားနားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated သောကူးယူအချက်, အကောင်းဆုံးရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်လေ့လာခဲ့သည်။ ဒါဟာပိုပြီးမကြာသေးမီက Synaptic plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။48) NFκBထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်သွေးဆောင်သည်49,50) နျူကလိယ၏ dendritic ကျောရိုး၏ကိုကင်းရဲ့ induction များအတွက်လိုအပ်သည်ဘယ်မှာအလတ်စား spiny အာရုံခံ accumbens ။ ထိုကဲ့သို့သောNFκBကို induction သည်မူးယစ်ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအာရုံပြုစေသည်။50) လက်ရှိသုတေသန၏အဓိကရည်မှန်းချက်NFκBဒီဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့် plasticity ဖြစ်ပေါ်စေသည်ရာမှတစ်ဆင့်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာNFκB၏ကင်းသော induction ΔFosBမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်: နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosB overexpression အဆိုပါကူးယူအချက်များ၏ΔcJunကြီးစိုးအနုတ်လက္ခဏာလုပ်ကွက်ကိုကင်းသော induction ၏ overexpression စဉ်NFκBဖြစ်ပေါ်သည်။21,49) ΔFosBအားဖြင့်NFκB၏စည်းမျဉ်းမူးယစ်ဆေးအရေးယူမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရှုပ်ထွေးမှတ်တမ်းကက်စကိတ်ဖော်ပြသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ, NFκB striatal ဒေသများတွင်စိတ်ကြွဆေး၏ neurotoxic သက်ရောက်မှုအချို့နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။51) အလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျ spinogenesis အတွက်NFκB၏အခန်းကဏ္ဍကိုမကြာသေးမီကစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာမော်ဒယ်များမှတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး,52) စိတ်ကျရောဂါများနှင့်စွဲလမ်း၏ comorbidity စဉ်းစားအထူးအရေးပါမှုတစ်ခုတွေ့ရှိချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse များ၏ကောင်းမွန်စွာလေ့လာဖြစ်ရပ်ဆန်း။
အချက်-2 (MEF2) တိုးမြှင့် Myocyte နှလုံး myogenesis ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပိုများသော rerecently, MEF2 ဦးနှောက် function ကိုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။53) အကွိမျမြားစှာ MEF2 isoforms နျူကလိယအပါအဝင်သူတို့စုဆောင်းသည့်ပရိုတိန်း၏သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်. ဗီဇကူးယူကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်နိုင်သောအလတ်စား spiny သူတို့ homo- ဖွဲ့စည်းရန်ဘယ်မှာအာရုံခံနှင့် heterodimers accumbens, ဦးနှောက်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ မကြာသေးမှီကအလုပ်နာတာရှည်ကင်း calcineurin တစ် D2 အဲဒီ receptor-Camp-မှီခိုတားစီး, တစ်ဦး Ca1 မှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် MEF2 လှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်သောတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှယန္တရားဖော်ပြထားပါတယ်+-dependent ပရိုတိန်း phosphatase ။28) အစောပိုင်းကဖော်ပြထားအဖြစ်လည်းကင်းနှင့်ΔFosBများအတွက်ပစ်မှတ်ဖြစ်သည့် Cdk5 ၏ကင်းစည်းမျဉ်း, အဖြစ်ကောင်းစွာပါဝင်နိုင်ပါသည်။ MEF2 လှုပ်ရှားမှု၌ဤလျှော့ချရေးအလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏ကင်းသော induction ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိအလုပ်၏အရေးပါသောအာရုံစိုက် MEF2 ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်မှတစ်ဆင့်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးကူးယူအချက်များစွဲမော်ဒယ်များအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ကြပြီကြောင့်အများအပြား၏အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ စွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရအခြားသူများကနျူကလိယ 1 ကူးယူအချက် (NAC1), အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတုန့်ပြန်အချက်များ (EGRs), နှင့်ကူးယူ၏အချက်ပြ transducers နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ (stats) accumbens, အ glucocorticoid အဲဒီ receptor ပါဝင်သည်။1,2) ကိုယ့်တဦးတည်းသာဓကသကဲ့သို့, glucocorticoid အဲဒီ receptor ကိုကင်းရှာဘို့ dopaminoceptive အာရုံခံအတွက်လိုအပ်ပါသည်။54) အနာဂတ်သုတေသန၏ရည်မှန်းချက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့တုန့်ပြန်နျူကလိယ accumbens နှင့်အခြားဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်သွေးဆောင်အဆိုပါကူးယူအချက်များတစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောအမြင်ရရှိရန်နှင့်သူတို့အမူအကျင့် phenotype အထောက်အကူပြုဖို့သြဇာလွှမ်းမိုးပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏အကွာအဝေးသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် စွဲလမ်း၏။
အနာဂတ်သုတေသန၏အခြားအဓိကရည်မှန်းချက်ကဤအမျိုးမျိုးသောကူးယူအချက်များသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုထိန်းညှိပေးသောအားဖြင့်တိကျသောမော်လီကျူးခြေလှမ်းများ delineate ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယခုကြှနျုပျတို့သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇမှအတူတကွဗီဇန်းကျင် chromatin ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် catalyzes သော RNA polymerase II ကိုရှုပ်ထွေး၏နောက်ဆက်တွဲစုဆောင်းမှုကိုထိန်းညှိပေးသော Co-Active သို့မဟုတ် Co-repressor ပရိုတိန်းတစ်စီးရီးစုဆောင်းကြောင့်ကူးယူအချက်များထိန်းချုပ်မှုမျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုသိရ ကူးယူ။4) ဥပမာအားဖြင့်, မကြာသေးခင်ကသုတေသနΔFosBများ၏စွမ်းရည်ကို၎င်း cdk5 ဗီဇဟာမျိုးဗီဇမှပရိုတိန်းကိုပွနျလညျဆောကျလုပျနေတဲ့ histone acetyltransferase နှင့်ဆက်စပ် chromatin ၏စုဆောင်းမှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဖြစ်ပေါ်သွေးဆောင်မှသရုပ်ပြခဲ့သည်။55) ဆနျ့ကငျြ, အက c-Fos ဗီဇဖိနှိပ်ဖို့ΔFosBများ၏စွမ်းရည်ကို (တစ် histone deacetylase ၏စုဆောင်းမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖိနှိပ် histone methyltransferase အဖြစ်ယူဆရအခြားဖိနှိပ်ပရိုတိန်းနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဖြစ်ပေါ်သဖန်းသီး။ 3).2,9,31) chromatin စည်းမျဉ်းပရိုတိန်းရာပေါင်းများစွာဖွယ်ရှိသည်၎င်း၏ activation သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်မှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်မျိုးဗီဇမှစုဆောင်းဖြစ်ကြောင်းပေးထား, ဒီအလုပ်လာမည့်နှစ်များတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်သောပမာဏ၏ရေခဲတောင်၏ရုံအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။
ΔFosBလုပ်ဆောင်ချက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ယန္တရားများ။ ΔFosBကမြှင့်လုပ်ဆောင်တဲ့မျိုးဗီဇ (ဥပမာဖို့ချည်နှောင်သောအခါကိန်းဂဏန်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးဆက်များကိုသရုပ်ဖော်, Cdk5) ဖိနှိပ်မှုတွေ (ဥပမာနှိုင်းယှဉ်, က c-Fos) ။ မှာ Cdk5 ကမကထ (က), ΔFosB histone စုဆောင်းလေ့ကျင့် ...
တိုးတက်မှုမူးယစ်ဆေး-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကူးယူအချက်များများအတွက်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇဖော်ထုတ်ရာ၌အတိုင်း, ဤအချက်အလက်မူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားထုတ်မှုကိုလမ်းပြဖို့အသုံးပြုနိုင်ကာ ပို. ပို. ပြည့်စုံ template ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာအသစ်ကဆေးဝါးကုသစွဲအခြေခံကြောင်းကူးယူယန္တရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတွင်ဤအံ့သြဖွယ်တိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်နေသည်။
1. Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001;2: 119-128 ။ [PubMed]
2. Nestler EJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3. Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မော်လီကျူး neurobiology ။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2001;10: 201-217 ။ [PubMed]
4. Robison AJ, Nestler EJ ။ မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011;12: 623-637 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5. မော်ဂန် JI, Curran တီချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇ: အပေါ်ဆယျနှစျ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1995;18: 66-67 ။ [PubMed]
6. et al Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ Yazdani S က။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses ။ 2008;62: 358-369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7. Chen က J ကို, Kelz ကို MB, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nakabeppu Y ကို, Nestler EJ ။ နာတာရှည် Fos-related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင် deltaFosB ၏တည်ငြိမ်မျိုးကွဲ။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 4933-4941 ။ [PubMed]
8. Hiroi N, Brown J, Haile C, Ye H, Greenberg ME, Nestler EJ ။ FosB Mutant ကြွက်များ - Fos နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပရိုတင်းများကိုနာတာရှည်ကိုကင်းများနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ကိုကင်း၏စိတ်ကိုသိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမြင့်တက်လာခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1997;94: 10397-10402 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9. Renthal W က, Carl TL, ဝင်္ငါ Covington သူ, 3rd, Truong HT, Alibhai ငါ et al ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်က c-fos ဗီဇ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 7344-7349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Hiroi N ကို, Marek GJ, Brown က JR, သငျတို့သ H ကို, Saudou က F, Vaidya VA သို့, et al ။ နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှု၏, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များအတွက် fosB ဗီဇ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 1998;18: 6952-6962 ။ [PubMed]
11 ။ Jorissen H ကို, Ulery P ကိုဟင်နရီက L, Gourneni S က, Nestler EJ, Rudenko G. အ Dimerization နှင့်ကူးယူအချက် DeltaFosB ၏ DNA ကို-binding ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဇီဝဓါတုဗေဒ။ 2007;46: 8360-8372 ။ [PubMed]
12 ။ Winstanley, CA, LaPlant မေး, Theobald DEH, အစိမ်းရောင်က TA, Bachtell RK, Perrotti LI, et al ။ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 10497-10507 ။ [PubMed]
13 ။ Alibhai IN, အစိမ်းရောင်က TA, Potashkin ဂျာ Nestler EJ ။ fosB နှင့် DeltafosB mRNA စကားရပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: Vivo နှင့်စသည်တို့လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res ။ 2007;1143: 22-33 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Ulery PG, Rudenko, G, Nestler EJ ။ phosphorylation အားဖြင့် DeltaFosB တည်ငြိမ်မှု၏စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 5131-5142 ။ [PubMed]
15 ။ Ulery-Reynolds က PG, Castillo MA, Vialou V ကို, Russo SJ, Nestler EJ ။ DeltaFosB ၏ Phosphorylation Vivo အတွက်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှု mediates ။ neuroscience ။ 2009;158: 369-372 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Carle TL, Ohnishi YN, Ohnishi YH, Alibhai IN, Wilkinson MB, Kumar A, et al ။ ထိန်းသိမ်းထားသော C-terminal degron ဒိုမိန်းမရှိခြင်းသည် osFosB ၏ထူးခြားသောတည်ငြိမ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007;25: 3009-3019 ။ [PubMed]
17 ။ Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Jr က Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, et al ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999;401: 272-276 ။ [PubMed]
18 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003;6: 1208-1215 ။ [PubMed]
19 ။ Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, et al ။ DeltaFosB: မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB ဘို့တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9: 205-211 ။ [PubMed]
20 ။ Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 2488-2493 ။ [PubMed]
21 ။ Peakman MC, Colby ကို C, Perrotti LI, Tekumalla P ကို, Carl T က, Ulery P ကို, et al ။ Transgene ကြွက်တွေမှာက c-ဇွန်၏အလွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ၏သွေးဆောင်, ဦးနှောက်ဒေသတိကျတဲ့စကားရပ်ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2003;970: 73-86 ။ [PubMed]
22 ။ Winstanley, CA, Bachtell RK, Theobald DE, Laali S က, အစိမ်းရောင်က TA, Kumar ကတစ်ဦး, et al ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတိုးလာ Impulse: အ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Cereb Cortex ။ 2009;19: 435-444 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Kauer ဂျာ Malenka RC ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007;8: 844-858 ။ [PubMed]
24 ။ Shippenberg TS, Rea ဒဗလျူအသိကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှ: dynorphin နှင့် Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonists ခြင်းဖြင့်မော်ဂျူ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1997;57: 449-455 ။ [PubMed]
25 ။ Bruchas MR, မြေ BB, Chavkin C. စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်လိုလားသူစွဲလမ်းအပြုအမူတွေတစ် modulator တွေကိုအဖြစ် dynorphin / Kappa opioid စနစ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2010;1314: 44-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Bibb ဂျာ Chen က J ကို, တေလာ JR, Svenningsson P ကို, Nishi တစ်ဦးက, Snyder GL, et al ။ ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများအာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝ။ 2001;410: 376-380 ။ [PubMed]
27 ။ Norrholm SD, Bibb ဂျာ Nestler EJ, Ouimet CC ကို, တေလာ JR, နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင်ပြန့်ပွား cyclin-မှီခို kinase-5 ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည်။ neuroscience ။ 2003;116: 19-22 ။ [PubMed]
28 ။ Pulipparacharuvil S က, Renthal W က, et al Hale က CF, Taniguchi M က, Xiao, G, Kumar ကတစ်ဦး။ ကိုကင်း Synaptic နှင့်အမူအကျင့် plasticity ထိန်းချုပ်ဖို့ MEF2 ထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;59: 621-633 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004;47(ပျော့ပျောင်း 1): 33-46 ။ [PubMed]
30 ။ Russo SJ, Dietz DM, Dumitriu: D, Morrison JH, Malenka RC, Nestler EJ ။ အဆိုပါစွဲ synapses: နျူကလိယ accumbens အတွက် Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏ယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2010;33: 267-276 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ ဝင်္ငါ Covington သူ, 3rd, Dietz DM, LaPlant မေး, Renthal W က, Russo SJ, et al ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2010;327: 213-216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ Renthal W က, Kumar ကတစ်ဦး, Xiao, G, Wilkinson က M, Covington သူ, 3rd, ဝင်္ငါ et al ။ ကိုကင်းများက chromatin စည်းမျဉ်းများ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ sirtuins များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009;62: 335-348 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Mayr B က, အ phosphorylation-မှီခိုအချက် CREB အားဖြင့် Montminy အမ်မှတ်တမ်းစည်းမျဉ်း။ နတ်ဗြာ Mol ဆဲလ် Biol ။ 2001;2: 599-609 ။ [PubMed]
34 ။ Carlezon WA, Jr က Duman RS, Nestler EJ ။ CREB ၏များစွာကိုမျက်နှာများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2005;28: 436-445 ။ [PubMed]
35 ။ ဂရေဟမ် DL, Edwards က S နဲ့, Bachtell RK, DiLeone RJ, Rios M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူနျူကလိယ accumbens အတွက် dynamic BDNF လှုပ်ရှားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse တိုးပွားစေပါသည်။ နတ် neuroscience ။ 2007;10: 1029-1037 ။ [PubMed]
36 ။ Briand LA က, Blendy ဂျေအေ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲချိတ်ဆက်မော်လီကျူးများနှင့်မျိုးဗီဇအလွှာဟာ။ ဦးနှောက် Res ။ 2010;1314: 219-234 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Carlezon WA, Jr က Thome J ကို, Olson VG, et al လိန်း-Ladd SB, Brodkin ES, Hiroi N ကို။ CREB အားဖြင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံ။ 1998;282: 2272-2275 ။ [PubMed]
38 ။ Barrot M က, Olivier JD, et al Perrotti LI, DiLeone RJ, Berton အို Eisch AJ ။ နျူကလီးယပ်အတွက် CREB လှုပ်ရှားမှုစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများ shell ကိုထိန်းချုပ်မှု Gates accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002;99: 11435-11440 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ et al Larson eb, ဂရေဟမ် DL, Arzaga RR, Buzin N ကို, ဝက်ဘ်က J ကို, အစိမ်းရောင်က TA ။ နျူကလီးယပ်အတွက် CREB ၏ Overexpression shell ကို Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်များတွင်ကင်းအားဖြည့်တိုးပွါး accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2011;31: 16447-16457 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ et al အစိမ်းရောင်က TA, Alibhai IN, Roybal CN, Winstanley, CA, Theobald DE, Birnbaum စင်ကာပူဒေါ်လာ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်သည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် (CREB) လှုပ်ရှားမှု binding အနိမ့်သိသိ adenosine monophosphate တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်ကကမကထပြုခဲ့တဲ့အပြုအမူ phenotype ထုတ်လုပ်သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67: 28-35 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ et al Vialou V ကို, Feng တို့ဂျေ, Robison AJ, Ku သည် SM, ဖာဂူဆန်: D, Scobie KN ။ သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက်နှင့်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်းနှစ်ဦးစလုံး deltaFosB ၏ကင်းသော induction ဘို့လိုအပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2012;32: 7577-7584 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ Dinieri ဂျာ Nemeth CL, Parsegian တစ်ဦးက, Carl T က, Gurevich VV, Gurevich အီး, et al ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွင်းစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း function ကို၏သွေးဆောင်နှောင့်အယှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေမှာကြိုးနဲ့ဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများမှပြောင်းလဲ sensitivity ကို။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 1855-1859 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ dong Y ကို, အစိမ်းရောင် T က, Saal: D, Marie H ကို, et al Neve R ကို, Nestler EJ ။ CREB နျူကလိယ accumbens အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် modulates ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9: 475-477 ။ [PubMed]
44 ။ Huang က YH, လင်း Y ကို, Brown က TE, ဟန် MH, Saal DB, Neve RL, et al ။ N-methyl-D-aspartate အချိုမှုရှိတဲ့ Receptor (NMDAR) receptors ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ: CREB နျူကလိယ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ output ကိုအာရုံခံ accumbens modulates ။ J ကို Biol Chem ။ 2008;283: 2751-2760 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ ဘရောင်း TE, Lee က BR, Mu P ကို, ဖာဂူဆန်: D, Dietz: D, Ohnishi yn, et al ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor ာင်းတစ်ဦးကအသံတိတ် synapses-based ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2011;31: 8163-8174 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ et al အစိမ်းရောင်က TA, Alibhai IN, Hommel JD, DiLeone RJ, Kumar ကတစ်ဦး, Theobald DE ။ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးများကနျူကလိယ accumbens အတွက်သွေးဆောင်စခန်းအစောပိုင်း repressor ထုတ်ဖော် induction စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 8235-8242 ။ [PubMed]
47 ။ et al အစိမ်းရောင်က TA, Alibhai IN, Unterberg S က, Neve RL, Ghose S က, Tamminga, CA ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကသူတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာကူးယူအချက်များ (ATFs) ATF2, ATF3 နှင့် ATF4 ကိုသက်ဝင်၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 2025-2032 ။ [PubMed]
48 ။ Meffert MK, ဦးနှောက်အဲန်အက်ဖ်-kappaB များအတွက် Baltimore ဃဇီဝကမ္မဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2005;28: 37-43 ။ [PubMed]
49 ။ အန်းအီး, Chen က J ကို, Zagouras P ကို, မဂ္ဂနာ H ကို, ဟော်လန် J ကို, Schaeffer အီး, et al ။ နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens နျူကလီးယားအချက်-kappaB ၏ induction ။ J ကို Neurochem ။ 2001;79: 221-224 ။ [PubMed]
50 ။ Russo SJ, Wilkinson ကို MB, et al Mazei-Robison က MS, Dietz DM, ဝင်္ငါ Krishnan V ကို။ နျူကလီးယားအချက် Kappa B ကိုအချက်ပြအာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်ထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 3529-3537 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ Asanuma M က, Cadet JL ။ striatal အဲန်အက်ဖ်-kappaB DNA ကို-binding လှုပ်ရှားမှုအတွင်းစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တိုး superoxide dismutase Transgene ကြွက်တွေမှာ attenuated ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 1998;60: 305-309 ။ [PubMed]
52 ။ et al Christoffel DJ သမား, ရွှေလုပ် SA, Dumitriu: D, Robison AJ, Janssen WG ကို, Ahn HF ။ IκB kinase လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် Synaptic နှင့်အမူအကျင့် plasticity ထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2011;31: 314-321 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Flavell SW, Kim က TK, Grey က JM, Harmin DA, Hemberg M က, ဟောင်ကောင် EJ, et al ။ MEF2 မှတ်တမ်းအစီအစဉ်၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Synaptic ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇနှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု-မှီခို polyadenylation site ကိုရွေးချယ်ရေးဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;60: 1022-1038 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ Ambroggi က F, Turiault M က, et al Milet တစ်ဦးက, Deroche-Gamonet V ကို, Parnaudeau S က, Balado အီး။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲ: dopaminoceptive အာရုံခံအတွက် glucocorticoid အဲဒီ receptor ကိုကင်းရှာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ နတ် neuroscience ။ 2009;12: 247-249 ။ [PubMed]
55 ။ et al Kumar ကတစ်ဦး, Choi KH, Renthal W က, Tsankova မိုင်, Theobald DE, Truong HT ။ Chromatin ပြုပြင် striatum အတွက် cocaineinduced plasticity အခြေခံအဓိကယန္တရားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005;48: 303-314 ။ [PubMed]